Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Home STARS EUROPEAN Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Aogositra 18, 2017
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Zidane Alemana'. Ny Mesut Ozil ny tantaram-pitiavan'antoko sy ny zava-misy tsy fantatra momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ireo rakitsoratr'i Mesut Ozil ary ny fahaizany manao fahaiza-manao, saingy vitsy no mihevitra ny fiainany ivelan'ny toerana izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Voalohandohan'ny fiainana
Mesut Özil Teraka tamin'ny 15 1988, XNUMX, tany Gelsenkirchen, Alemaina mankany Mustafa Özil (ray) ary Gulizar Özil (reny). Teraka farany teo amin'ny ankizy efatra izy. Ny tena zava-dehibe dia izy dia teraka avy amin'ny Silamo avy amin'ny Tiorka. Amin'ny maha-izy azy, dia Turkmen-n'ny Miozolomana Muslim izay mpifindra monina ny ray aman-dreniny. Nifindra avy tany Torkia sy Alemaina ireo ray aman-drenin'i Mesut mba hahatonga azy ireo hiaina tsara kokoa ao amin'ny foiben-toeran'ny Ruhr, any Alemaina.
Nanomboka ny fiainany i Mesut Ozil tamin'ny naha zaza tao amin'ny trano mahantra. Teraka nandritra ny vanim-potoanan'ny indostrialy alemana izay nahitana ny tahan'ny tsy fananana asa ho an'ny mpifindra monina mihoatra ny 70%. Ny ray aman-dreniny àry dia niady tamin'ny asa iray ambany karama ho an'ny olona hafa mba hitazonana ny fifindrafindran'ny fianakaviana. Ny manodidina ny mpifindra monina mpifindra monina dia voafaritra amin'ny fahantrana ara-piarahamonina tsy voafetra ary maro ireo trano fandefasana tranon'olona izay mampiseho ny fahantrana.
Na dia teo aza ireo fanamby ireo, dia tapa-kevitra ny hahomby i Mesut. Ny zava-drehetra napetrak'ilay tanany dia nandeha tsara .. Nanomboka tamin'ireo mpanazatra amin'ny atidohany ho amin'ny fikasany hanomboka milalao baolina kitra. Amin'ny teny ara-bakiteny, dia nampiasa baolina kitra i Mesut ho toy ny fandosiran'ny fahantrana.
Ny fitiavany ny baolina dia nanomboka rehefa nanomboka nilalao izany tao amin'ny kianja filalaovany akaikin'ny tranony. Mesut Ozil raha vao zokiny dia nanjary navotsotry ny baolina baolina. Rehefa niezaka izy, dia noraisiny an-trano izy ary natory teo am-pandriana. Nandany fotoana be hijerena ny zokiny zokiny koa izy mba hanatsara azy.
Sary avy amin'i Mesut Ozil
Niroborobo izy, naka lesona amin'ny baolina baolina marobe avy amin'ny sakaizany Mutlu, izay tia baolina kitra fotsiny noho ny filalaovana azy. Mutlu dia tsy mino mihitsy hoe misy olona iray amin'ny sata mpifindra monina afaka manao izany amin'ny baolina kitra. Ny tsara indrindra, ny manodidina an'i Mesut Ozil (mpifanolo-bodirindrina manodidina ny mponin'i 16,000 manodidina ny manodidina) dia tsy hita velively ho sehatr'asa ho an'ny mpilalao baolina talenta.
Ny tapa-kevitra ny hahomby dia nitarika tantara iray mahomby izay nanentana ny firenena alemana. Heverina ho toy ny mpilalao nasionalin'ny firenena voalohany avy amin'ny mpifindra monina iray izy mba hahatonga azy io ho iraisam-pirenena.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Ny fanombohana mankany amin'ny soccer
Nanapa-kevitra ny hanome baolina baolina i Mesut Ozil raha vantany vao hitany fa fomba iray azo antoka ny hiala amin'ny fahantrana. Nanomboka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny baolina kirany izy ary nanamafy ny fahaiza-manaony baolina kitra niaraka tamin'ireo namany tao amin'ny "Monkey Cage," (toby eo an-toerana izay voahodidin'ny fefy) eo amin'ny manodidina ny mpifindra monina.
Izany no 'monkey cage' dia nipoitra voalohany ny fahaiza-manaon'ny radiôla Ozil. Izany dia nitranga tao amin'ny distrikan'i Alzeria Bismarck ao Gelsenkirchen. I Mesut Ozil dia eo an-kianja 'isan'andro na masoandro, ranomandry na orana', hoy i Mutlu zokiny lahy.
Ny traikefa azony avy amin'ny "Lalao Monkey Cage" dia nitombo ny fahafahany hahazo fitsapana mahomby ho an'ny ekipa lehibe kokoa ivelan'ny mpifindra monina mpifindra monina. Voalohany, nisoratra anarana ho amin'ny ekipa baolina kitra fototra ao amin'ny sekoly izy.
Mesut dia nandroso hatrany amin'ny zatovo ka hatramin'ny olon-dehibe semi-pianarana izay manondro ny baolina kolejy amin'ny oniversite. Ny sekoly ambaratonga faharoa no lehibe indrindra any Alemana izay manana mpianatra 1,400. Tena nankasitrahana izy ary mbola nofidina hisolo tena ny sekoly.
Joachim Herrmann, filoha lefitry ny sekoly ambaratonga faharoa ao Ozil, dia mamariparitra ny fientanam-pony amin'ny baolina kitra tahaka ny 'bitika kely', nampiany hoe: 'Nanana fahatsapana foana aho fa noraisiny mihitsy aza ny baolina.'
Avy any amin'ny varavarankelin'ny efi-pianarany, i Ozil dia nahita ny kianjan'i Veltins Arena, kianja filalaovan'i Schalke. Ny zatovo nofinofy dia nanana antony tokony hamelana ny sainy. Ankoatra ny talentany teo aloha, dia manana fifandraisana akaiky amin'ny federasiona ny sekoly.
Voan'ny fanatanjahatena ny zazalahy Ozil. Na izany aza, dia nahira-tsaina koa izy tany an-tsekoly. Manuel Neuer, mpilalao baolina kitra any Bayern, koa i Munich. Taona vitsivitsy taty aorian'i Ozil izy, fa i Julian Draxler kosa ambany. Benedikt Howedes sy Joel Matip koa dia nahazo diplaoma tao amin'ny sekoly. Ny sekoly dia nandroso tamin'ny fehezan-teny baolina kitra. Nanana asa fampiofanana maro izy ireo, fivoriana telo isa-maraina, telo amin'ny hariva ary in-dimy ao anatin'ny faran'ny herinandro.
Ozil dia fantatra amin'ny maha-mpianatra voatokana azy saingy amin'ny fiofanana ary amin'ny andro fiarahany dia niova ny toetrany. 'Raha vao nahita an'i Mesut sambany aho dia tsy maintsy nanamarina ny taonany', hoy i Krabbe, mpampianatra. 'Tena kely izy, mangina, niboridana tampoka. Saingy teo amin'ny kianja filalaovam-baolina dia izy no mpilalao baolina kitra, mpilalao lehibe indrindra. Misarika ny tratra ho azy izy. "Izy no mpanohana ny ekipanay."
Tany amin'ny College Gelsenkirchen no nahafantaran'i Ozil fa hahomby amin'ny alalan'ny baolina kitra izy. Izy dia niady lalindalina ny momba ny maha-izy azy raha vao nanomboka nahazo fankasitrahana be. Fantatra fa tena zazakely tena saro-kenatra izy.
Ny mpampianatra indray no nanao izany "Tsy ny mpianatra i Mesut no afaka niatrika vahoaka. Tena saro-kenatra foana izy. Fa raha mahita azy eny an-tampon-doha izy dia olon-kafa, satria teo no nipoaka izy. Omeo baolina izy, ary ho olon-kafa izy. "
'Zavatra kely saro-kenatra izy saingy afaka mitifitra 25 metatra, mihazakazaka haingana ary miditra amin'ny fifaninanana rehetra amin'ny baolina', hoy i Ralf Maraun. Nitohy izy ... 'Mpilalao baolina an-dalam-be izy. Tsaroako indray mandeha fa nahazo ny tanjona 12 lalao ho zero izahay. Mesut dia namono 10. Ny mpanazatra ny ekipa iray dia nanala ahy ary niteny hoe: "Avela azafady ny ankizy kely any an-trano rehefa afaka fotoana fohy". '
Tao amin'ny College, ilay zazalahy mpifindra monina avy ao Bismarck no mpilalao baolina malaza indrindra. Tsy naharitra ela talohan'ny nisoratra anarana tao amin'ny federasiona baolina kitra alemà ho an'ny sekoly nahazoany ny ID. Nahafeno azy handray anjara amin'ny fifaninanana lehibe kokoa izany.
I Mesut dia manokana ny ora rehetra mba hanomezana aina ny fanirian'ny fiainana. Taorian'ny nahombiazany dia nanao zavatra iray izay mbola mahatsiaro azy hatramin'izao hatramin'izao. Izany dia; Mizara amin'ny fahombiazany amin'ny havan-tiany.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fianakavian'i Mesut Ozil dia nanomboka ny fiainana tao amin'ny distrikan'i Bismarck, Alemana. Ity dia vondrom-piarahamonina iray any Alemana izay mipetraka amin'ny ankamaroan'ny Tiorka mpifindra monina.
Nifindra avy any Torkia ny fianakaviany ka lasa mpiasa any amin'ny taona 1967. Nandritra ny taona maro dia niaina tao anatin'ny fahantrana izy ireo. Izy no Mesut izay nampiasa baolina kitra mba hanova ny hoavin'ny fianakaviany. Izy no hany mpifindra monina Tiorka izay nahatonga ny fianakaviany hanana fiakarana mahagaga avy amin'ny fahantràna amin'ny harena tsy hay resena.
RAY: Mustafa Özil no rain'i Ozil. Izy dia mpifindra monina Tiorka faharoa izay nifindra monina tany Alemaina niaraka tamin'ny rainy fony izy 6 taona.
Talohan'ny nanolorany asa taorian'ny sonian'ny zanany lahy tamin'ny baolina kitra, mpiasa taloha izy taloha. Nanomboka tamin'ny maha-mpivarotra azy (vokatra akoho) izy nandritra ny fahatanorany.
Mesut Ozil dia namela an'i Mustafa rainy ho lasa mpitantana azy rehefa avy eo amin'ny baolina kitra. Ity fialamboly ity dia nanadino azy ny asany taloha ary mifantoka tanteraka amin'ny raharaham-barotra baolina kitra. Nanao vola be izy tamin'ny asa aman-janany.
rENY: Ny vehivavy Gulizar Özil no renin'i Mesut Ozil. Izy dia nanomboka tamin'ny naha vadin-trano azy izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny zanany. Izy dia nofaritana ho renim-pianakaviana mpifindrafindra toaka avy amin'ireo mpivady izay niara-tafaraka taminy tany amin'ny mpifindra monina mpifindra monina tany Alemaina. Misy reny matanjaka / reny matanjaka eo anelanelan'ny Mesut sy Gulizar.
mpiray tam-po: Mesut Ozil manan-janaka telo mianadahy; Mutlu Özil, Nese Özil ary Dugyu Özil.
Ny rahalahiny zokiny, Mutlu Ozil. Izy dia mpilalao baolina kitra izay nilalao tamin'ny baolina kitra mba tsy hikolokolo azy, fa mba hanandrana ireo olona liana amin'ny fijerena ny fahaiza-manaony. Afaka nanosika ny asany izy saingy tsy nino mihitsy fa ny mpifindra monina tiorka dia hanao ny baolina kitra. Amin'izao fotoana izao, izy dia nambara fa hitsangana i Mesut Ozil amin'ny famonoana. Nianatra baolina kitra avy aminy i Mesut. Ny mahatsikaiky, mandalo, ary milalao fahaiza-manao dia avy amin'ny Mutlu.
Mesut Ozil dia manana anabavy roa mirahalahy; Nese Ozil (ankavanana) sy Dugyu Ozil (havia). Samy nanintona ny sain'ny olona izy ireo noho ny an'i Mesut Özil. Ny Nese (faranana ankavanana) indrindra no nofaritana ho ny klone Mesut. Ianao, ilay akaiky indrindra sady rahavaviny vavy Dugyu dia akaiky kokoa. Ny fiakaran'ny rahalahin'izy ireo amin'ny alahelo dia nanome fanohanana ara-bola maro ho an'ny rahavaviny mahafinaritra. Androany, efa nofinofy ela ny androm-piainany.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Ny fiainam-pananahana
Voalohany indrindra, sarotra ny fiainana an'i Mesut Ozil. Hitany fa nahasarika ny ankamaroan'ireo vehivavy tsy silamo izay tsy te hanova ny fivavahany, ka nitarika ho amin'ny fisarahana.
Nanomboka teo i Mesut Ozil dia efa nampiarahina tamin'i Anna Maria, modely alemana ary efa nanambady mpilalao baolina kitra failandey, Pekka Lagerblom.
Rehefa nifarana niaraka tamin'i Ozil izy, dia niaraka tamin'i Bushido izy ankehitriny.
Mesut koa dia niarahan'i Aida Yespica, mpanjakavavin'ny hatsaran-tarehy mahafatifaty izay lasa lasa Venezoela Miss in 2002.
Nanomboka nampiaraka ny maria Mandy Capristo, mpihira iray avy amin'ny mpandraharaha, avy amin'ny 2013 saingy nifarana ny fifandraisany tamin'ny 2014 taorian'ny nahafantarany fa nahita vehivavy hafa izy.
Taorian'izay dia niverina tamin'ny fifandraisany tamin'ny sipany ilay sipany sady mpihira malaza Mandy Capristo. Nanomboka ny volana novambra, ny 2015. Taorian'ny fisarahan'izy ireo dia nahatsapa izy ireo fa natao ho an'ny tsirairay ary niverina indray izy ireo.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Fisaorana miaraka amin'ny Ray
Ny Mustafa (rain'i Ozil) dia fantatra amin'ny fahasahiany. Izy dia mpikarakara ny zanany lahy tamin'ny Jolay 2011. Hatindra tsy ela i Mustafa dia nandao ny andraikitra taorian'ny fanapahan-kevitr'i Ozil hanendry an'i Mutlu rahalahiny. Nahitana ny fiandohan'ny fifandonana teo amin'ny ray sy ny zanaka. Mustafa dia milaza fa Mandy Capristo, sipan'i Mamut, dia tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitr'ilay zanany handroaka azy ho mpiasany.
Izany no nahatonga ny maro ho sahiran-tsaina. Nandao ny zanany lahy i Mustafa, taorian'ny nandroahana azy.
Araka ny tatitra iray; 'Tsy mora amin'ny lehilahy i Mustafa Ozil. Tena nifantoka tamin'ny Mesut izy ary nahafantatra fa nanana talenta lehibe izy. Mandeha amin'ny fampiofanana rehetra izy, ny lalao rehetra. Lasa ivon'ny fiainany izy taorian'ny nandaozany ny asa fitrandrahana metaliko tsy misy fotony mba hanarahana ny asan'ny zanany. '
Nisalasala ny tsy handao ny rainy ny orinasa medicale Mesut Ozil. Nangataka £ 495,000 izy tamin'ny fahaverezany. Mesut Ozil dia tsy niteny tamin'ny rainy hatramin'ny nataony. Ny fifandraisana eo amin'ny ray sy ny zanaka izay lazaina fa matanjaka indray dia novonoin'ny ady ara-dalàna.
Raha nitandrina ny fangatahany izy dia nitaky ny fiverenan'ny £ 800,000 ny mpisolovavan'i Mesut Ozil fa ny rainy dia naka ny zanany lahy noho izy tsy nanao na inona na inona. Natao tany ivelan'ny fitsarana ilay raharaha tamin'ny farany. Ity olana ity dia nahatonga ny ray aman-drenin'i Mesut Ozil hizara ny reny nanaraka ny fitarihan'ny zanany.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: A Muslim Serious But ...
Mesut Ozil dia Silamo. Raha ny tena manokana, dia silamo mendri-piderana izy, izay mamerina ny CORAN Masina alohan'ny andalana tsirairay izay tsy maintsy ataony. Raha niresaka tamin'ny gazety isan'andro "Der Tagesspiegel" any Berlin, hoy i Mesut, "Miala ao Koran foana aho alohan'ny handehanako (eny amin'ny saha). Tena manampy ahy hifantoka amiko izany. Mivavaka aho ary fantatry ny mpiara-mianatra amiko fa tsy afaka miresaka amiko mandritra ny vavaka ataoko izy ireo. "
Na dia Miozolomana aza i Mesut, dia sarotra ny mifady hanina mandritra ny fahavaratra. Izany dia noho ny asany ho mpilalao baolina.
Ankoatra izany dia mamerina andininy avy amin'ny quran izy mandritra ny hiram-pirenena alemana. Satria izy tsy afaka mihira ny hiram-pirenena.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Nosoloina Chessie toy ny ankizy
Mesut Ozil dia nianatra nilalao chess raha nitombo tao amin'ny faritra manodidina an'i Gelsenkirchen, any Alemaina. Tahaka ny baolina kitra, izy koa dia nampifanindran-dry zareo tamin'ny Chess araka ny zaza.
Mpikambana ao amin'ny ekipa baolina kitra any an-tsekoly izy ary klioban'ny klioba. Mesut koa dia liana tamin'ny Matematika any am-pianarana. Ny fitiavany ny Chess and Mathematics dia nanamboatra ny fomba fisainany teo an-toerana sy ny fanaovana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny lalao.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: tsy fahafatesana
Maro ireo mpankafy no nanontany ny fanontaniana; Is Mesut Özil IMMORTAL ?. Maro ireo mpankafy no nahatsikaritra ny endriky ny sarin'i Arsenal tamin'ny fandaniana farany an'i F1, Enzo Ferrari.
Na ny olo-malazany dia mihevitra fa i Mesut Özil no firaisan'ny vatana vaovao Enzo Ferrari. Ny mpamily fiarakaretsaka Italiana sy ny mpandraharaha dia maty tamin'ny 14 August, 1988 - nanome fotoana ampy fotsiny hitrandrahana ny fomba amam-piterahana indray vao teraka i Özil tamin'ny 15 Oktobra, 1988. Io teoria io dia natsangana tamin'ny fampianarana Bodista sy taoisista, izay milaza fa mamela ny zaza ny fanahy ary naterina aorian'ny fahafatesana. Izany no mahatonga ny olona maro amin'ny New Age hino fa i Enzo Ferrari, ilay mpamorona an'i Ferrari, dia niorina indray ho Mesut Ozil.
Ny fizotry ny Reincarnation sy ny fotoana fizahan-tany momba ny "celebs" dia tsy vaovao.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Tsy olombelona izy
Ny fanampiany dia tsy misy fetrany. Izany no antony mahatonga ny olona mino fa tsy olombelona izy. Mesut Ozil dia mahita izay hitan'ny olona sarotra. Ny sary etsy ambany dia manaporofo izany.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Charity
Fantatra ihany koa ny Mesut noho ny fiheverany ny filantrophika izay nanome vola be ho an'ny fikambanana maro mpanao asa soa. Namatsy ny loka ankapoben'ny World Cup an'ny 2014 izy (manodidina ny USD 5, 00, 000) mba hikarakarana ny zaza breziliana 23.
Ny fitsaboana sy ny fitsaboana no nahomby. Nataony izany ho toy ny marika fisaorana noho ny fandraisan'ny vahiny Breziliana fatratra. Anisan'ny tetikasa BigShoe izany. Ny tetikasa dia nifarana tamin'ny fanolorana ny kiraro ho fanomezana ho an'ny iray amin'ireo zaza Breziliana nentina ho mpilalao baolina kitra.
Tamin'ny volana May 2016, nitsidika ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Zaatari ao Jordana ihany koa i Mesut ary nanao sonia ho an'ireo mpankafy azy izay namorona ireo mpitsoa-ponenana Syriana nipoitra avy amin'ny 80,000.
Niahy ireo ankizy nafindra toerana noho ny ady an-trano Syriana. Nitsidika ny toby i Özil ary nilalao tamin'ny ankizy, nanao sonia ny fahatsiarovan-tena sy namoaka ny baolina kitra.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Momba ny masony
Raha jerena ny mason'i Mesut Özil, azonao atao ny mamorona sary sary ny olona iray mijaly amin'ny aretina Graves (aka aretin'ny hoditry ny maso). Saingy tsy mijaly amin'ny toe-javatra toy izany izy.
Ireo teboka telo izay mahatonga antsika hieritreritra fa tsy mpisoloky ny Graves i Özil:
Voalohany, tsy manatrika ny masony ny masony famantarana ny moka na soritr'aretina hafamahazatra.
Faharoa, ny aretina Graves dia toe-javatra izay matetika ny vokatra ara-batana dia matetika tonga ary mandeha, na miezaka mafy. Ny mason'i Özil dia nijanona ho tsy miova.
Farany, ny toe-javatra toy ny Graves dia manana levitra toy ny fahitana fahavoazana, alahelo ary fanaintainana, na fahavoazana eo imason'ny maso. Ho lasa mpilalao matihanina matihanina amin'ny avo indrindra amin'ny ankapobeny izany.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Ny bokiny
Nanolo-tena ho azy ny boky iray. Izy io mitondra ny lohateny "Mesut Özil Superstar". Izany dia nataon'ilay mpankafy mafana izay nanizingizina fa tsy mitonona anarana intsony.
Tia izany i Mesut ary nifanerasera taminy hanoratra ny iray amin'ireo izay manana ilay malaina 'Fikomiana ho amin'ny fahamendrehana'.
Ny tantaram-piainan'i Mesut Ozil momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Lisitry ny Accolades sy ny Achievement
(1) Tamin'ny Arsenal FC dia nahazo ny FA CUP izy (2013-14, 2014-15, 2016-17) ary ny fiarovan'ny fiarahamonina FA ao 2014,2015 sy 2017.
(2) Niaraka tamin'i Real Madrid, nahazo ny La Liga (2011-12), ny Copa del Rey (2010-11) ary ny Supercopa de España ao amin'ny 2012.
(3) Niaraka tamin'ny Werder Bremen, nahazo ny DFB-Pokal (2008-09) izy.
(4) Nahazo ny FIFA World Cup (2014) sy ny UEFA Eoropeana Under-21 Championship (2009) niaraka tamin'i Alemaina izy.
FANAZAVANA FANOMEZANA IZANY
X Assum-2009 Ambony Ambony Ambony
Fiadiana Tompon-dakan'ny World Cup 2010 FIFA
2011, 2012, 2013 ary 2015 Alemana Player of the Year
Mpilalao baolina kitra an'habakabaka 2010 FIFA (vs Ghana)
X Assum-2010 UEFA Champions League ambony fanampiana ho an'ny Jose Mourinho ary Real Madrid
2011-2012 La liga malaza ho an'i Jose Mourinho ary Real Madrid
2015-2016 Premier League fanampiana ambony Arsene Wenger ary Aseraly
2015-2016 Mpilalao amin'ny vanim-potoana Arsenal
2012 UEFA Mpilalao Best Player in Europe (toerana 10)
Tiorka Football Diary
Federico Valverde Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Ozil Mesut Jiona 28, 2018 Tamin'ny 1: 39 hariva
Honda Keisuke avy any Japon dia toa manao tsara araka ny filazan'ny mpilalao matihanina amin'ny tontolon'ny tontolon'ny zava-drehetra sady mijaly ny aretin'i Grave.
asu Oktobra 25, 2018 Tamin'ny 5: 24 hariva
u ny mpilalao baolina kitra fonao
Catherine Scoon Desambra 29, 2018 Tamin'ny 11: 35 hariva
Manomboka toy ny mpankafy be mpankafy ianao. Ankoatra izany, mampifandray an'i Amine Gulse izy ankehitriny saingy amin'ny marina dia izy no MY HUBBY.
vannyhenrico - Febroary 23, 2020
Febroary 18, 2020
vannyhenrico - Febroary 23, 2020 0
Ny tantaran'i Keylor Navas momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Jolay 24, 2018
Shkodran Mustafi tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Mario Gotze tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Novambra 12, 2017